Zinc Shot / Zinc Cut Wire Shot - China Shanghai Bosun Marokoroko
MAMPIAVAKA Zinc voatifitra nataon-ny dingan'ny sary, manapaka sy pana etc .. Ary izy ireo ampiasaina amin'ny deburing sy manadio amin'ny Aluminium samihafa firaka, Zinc castings ho faty. Satria ny hery misintona manokana dia akaiky ny vy sy ny hamafin dia ambany, ny deburing azo tanterahina tsy misy manao ny vokatra 'faritra. Raha tsy izany avahana amin'ny Aluminum Marokoroko, ny fiarovana Tsara ho ambany be kinding fotoana ny vovoka. Ary izy ireo koa dia ao amin'ny mazava Whitening mampiavaka ny ...
Zinc voatifitra nataon-ny dingan'ny sary, manapaka sy pana etc .. Ary izy ireo ampiasaina amin'ny deburing sy manadio amin'ny Aluminium samihafa firaka, fanitso castings ho faty. Satria ny hery misintona manokana dia akaiky ny vy sy ny hamafin dia ambany, ny deburing azo tanterahina tsy misy manao ny vokatra 'faritra. Raha tsy izany avahana amin'ny Aluminum Marokoroko, ny fiarovana Tsara ho ambany be kinding fotoana ny vovoka. Ary izy ireo koa dia ao amin'ny mazava Whitening mampiavaka ny faritra ny asa farantsa.
Zinc nanapaka tariby nitifitra Marokoroko sy manolotra ny haino aman-jery ny tena ambany dia ambany Rockwell B hamafin'ny (20 - 30) mety ampiasaina amin'ny deburring castings faty.
Zinc nalaina dia afaka manala tselatra hatramin'ny .020 "avy amin'ny castings ho faty.
Zinc nitifitra ihany koa ny mamela ny zinc deposition ny zavatra eo amin'ny asa izay manome harafesiny fanoherana.
Zinc voatifitra koa ampiasaina haka loko sy ny vovoka coatings. Ny malemy ilay manjarano ny fanitso nitifitra dia tena mahomby amin'ny fanesorana coatings tsy manimba tooling.
ny orinasa dia afaka manatanteraka tenona kitapo fonosana, ton kitapo fonosana, hazo lovia fonosana, fonosana plastika toy ny famonosana sy ny mpanjifa araka ny fepetra takiana
Zinc Cut tifitra
Previous: Vy Shot-S170
Next: Aluminium Shot / Aluminum Cut Wire Shot
Nikosokosoka Zinc Shot
Zinc Voatifitra Fipoahana
Zinc Voatifitra vary main'ny rivotra